RASMI: Laacibkii hore ee Liverpool, Chelsea iyo Arsenal, Yossi Benayoun oo isaga fariistay gabi ahaanba kubadda cagta – Gool FM
(Yurub) 11 Abriil 2019. Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe kooxaha Liverpool, Chelsea, Arsenal iyo West Ham United, Yossi Benayoun ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay gabi ahaanba ciyaarista kubadda cagta.
Laacibka reer Israeli oo 38-sano jir ah ayaa xirfaddiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyey kooxda Beitar Jerusalem kaddib markii 97 kulan u ciyaaray Liverpool isla markaana uu kula guuleystay Chelsea tartanka Europa League sanadkii 2013-kii.
Waxa uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay xulkiisa qaranka Israel sanadkii 2008, waxaana uu dalkiisa metelay 102 kulan.
“Muhiim ayey ii tahay inaan u mahad celiyo taageerayaasha, kuwaasoo i siiyay jacayl meel kasta oo aan tago.” ayuu Instagram-kiisa soo dhigay Benayoun kaasoo 24 gool u dhaliyey xulkiisa Israel
“Waan hubaa in cutubka xiga uu noqon doono mid adag oo aan wax xiiso ah lahayn.
“Waxaa jira waqtiyo waayaheyga ciyaareed ka mid ah oo aan marna ilaawi doonin.”
Benayoun ayaa saddexleey dhaliyey mid kasta oo ka mid ah tartammada Premier League, Champions League iyo FA Cup-ka intii lagu guda jiray waqtigiisii kooxda Liverpool.
Laacibkan khadka dhexe ayaa labo sanadood ku qaatay West Ham ka hor inta uusan heshiis 5 milyan oo gini ah ugu dhaqaaqin Liverpool sanadkii 2007, isagoo halkaas joogay saddex xilli ciyaareed ka hor inta uusan u wareegin Chelsea.
Waxa uu amaah ugu ciyaaray kooxaha Arsenal iyo West Ham ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxda Championship-ka ee Queens Park Rangers sanadkii 2013-kii.
Benayoun ayaa soo gabagabeeyey sanadkii 2014-kii ka ciyaarista dalka Ingiriiska isagoo ku biiray kooxda dalkiisa Israeli ka dhisan ee Maccabi Haifa, waana kooxda uu markiisii ugu horreysay u soo ciyaaray intii u dhaxaysay 1998 illaa 2002.
Kooxda Real Madrid oo xitaa diyaar u ah inay khasaarto si ay u iibiso Gareth Bale
Kaddib ciyaartii xalay, Pogba oo si toos ah loo waydiiyay haddii uu ku biirayo Real Madrid... (Muxuu ku jawaabay??)
Kooxda Bayern Munich oo la xiriirtay wakiilada Roberto Firmino
Liverpool oo wali la qaban la’ayahay kaddib markii ay guul ka gaartay Southampton… +SAWIRRO